ရှားပါး Lego Star Wars လေလံပွဲအတွက်သမ္မတနိုင်ငံ Gunship တက်အပါအဝင်အစုံ
22 / 02 / 2021 22 / 02 / 2021 ခရစ် Wharfe 827 Views စာ0မှတ်ချက် 10175 Vader ရဲ့ TIE ကို Advanced, 7191 X- တောင်ပံတိုက်လေယာဉ်, 75021 သမ္မတနိုင်ငံ Gunship, လလေံပှဲ, catawiki, Lego, Lego လေလံ, Lego Star Wars, Star Wars
ရှားရှားပါးပါးလက်ပေါ်၌သင်၏လက်ကိုရရှိရန်အခွင့်အရေးသင်၌ရှိသည် Lego Star Wars ဒီရက်သတ္တပတ်ရဲ့အတွက်သတ်မှတ် catawiki ၏တံဆိပ်ခတ်မိတ္တူအပါအဝင်လေလံ, 75021 သမ္မတနိုင်ငံ Gunship.
Brick Fanatics p ကိုရartသင့်ကိုအထင်ရှားဆုံးဖြစ်အောင်လေလံဆွဲတဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာထည့်ထားတယ် Legoမှာ -related စာရင်းများ catawiki။ ယခုသီတင်းပတ်၏ထူးခြားချက်များတွင်အမျိုးစုံရွေးချယ်ခြင်းပါဝင်သည် Lego Star Wars လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုမှအစစ်အမှန်များ၊ သိမ်းဆည်းရန်အမှန်တကယ် retro ပုံစံများကို mint-in-box ကော်ပီများဖြင့်ကူးယူထားသည်။
သင်သည်သင်၏ပြီးမြောက်ရန်ရှာဖွေနေရှိမရှိ classic UCS စုဆောင်းမှုသို့မဟုတ်ယခုနှစ် Republic Gunship သို့ပြန်လာရန်သင်မစောင့်နိုင်ပါ၊ ဤနေရာတွင်ရရှိနိုင်သောအရာများ၏ရွေးချယ်မှုများဖြစ်သည် catawiki အခုပဲ။
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းရှစ်နှစ်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်သော်လည်းလွန်ခဲ့သောသုံးပတ်အကြာတွင်ယခင် Trackogy နှင့် Clone Wars နှင့်သက်ဆိုင်သောအစုံအလင်ကိုရယူရန်တောင်းဆိုမှုများရှိခဲ့သော်လည်း၊ Lego Star Wars ပန်ကြားလွှာ။ အထောက်အထားအတွက် 75280 501 Legion Clone Troopers အတွက်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကိုသာကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်၊ Lego Ideas မဲပေးပှဲ Republic of Gunship ကိုအနာဂတ် UCS အစုံအဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။
အဲဒီမော်ဒယ်လ်သတင်းများအရအကောင်အထည်ဖော်လိမ့်မယ် ဒီနှစ်နှောင်းပိုင်း, သို့သော်သင် LAAT / i ကို 'i' ဟုညွှန်းသည့်ခြေလျင်တပ်ဆင်ထားပါကဤအသေးစားပုံစံစကေးကိုသင်လိုချင်ကောင်းလိုလိမ့်မည်။ မိတ္တူ လက်ရှိလေလံတင်လျက်ရှိသည် ဖြတ်. catawiki အသစ်စက်စက်၊ တံဆိပ်ခတ်ထားသည့်အတွက်အသစ်သော box နှင့် p ကိုဖွင့်နိုင်သည်art'coronavirus' သည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်ကဲ့သို့သိပ္ပံဆိုင်ရာစက်ဝန်းများအတွက်သီးသန့်သီးသန့်အသုံးအနှုန်းဖြစ်သည်။
10175 Vader ရဲ့ TIE ကို Advanced
အကယ်၍ သင်ကထိုထက်နောက်သို့ပြန်သွားပါကသင်၏အချိန်စက်ကိုခုန်ပြီး ၂၀၀၆ အတွက်ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ Lego Group မှ: D ကိုင်တွယ်arth Ultimate Collector စီးရီးမှ Vader ၏ကိုယ်ပိုင်ကြယ်တိုက်တိုက်လေယာဉ်။ 10175 Vader ရဲ့ TIE ကို Advanced p ကြောင်းတစ်ခုတည်းသောအချိန်နေဆဲဖြစ်သည်articular TIE Fighter မူကွဲကို UCS ပုံစံဖြင့်ပြန်ဆိုထားပြီးသင်အနည်းဆုံးဗားရှင်းတစ်ခုလိုချင်လျှင် Star Wars သင်၏စုဆောင်းမှုထဲသို့တင်ပါ၊ သင်သည်အမှန်တကယ်လွတ်သွားရန်မတတ်နိုင်ပါ။
တနည်းကား, လေလံပွဲများအတွက်ဗားရှင်းတက် catawiki လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်ခွဲကာလအတွင်းသဘာဝအလင်းရောင်နှင့်ရေချိုကဲ့သို့သောဆိုးဝါးသောအန္တရာယ်များမှဝေးဝေးသိုလှောင်ထားခြင်းခံရသည်။ ဒီဟာကယူရို ၇၅၀ ဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာပါ catawikiနောက်ဆုံးလေလံနှုန်းမှာယူရို ၈၃၀ မှယူရို ၉၃၀ အထိရှိတယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူများကခန့်မှန်းထားပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဈေးပေါပေါမကျပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း UCS လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ Lego မကြာမီအချိန်မရွေးပြန်လည် Group ။
7191 X- တောင်ပံ Starfighter
ဒီကျောက်မျက်ရတနာသည်အစောဆုံးနှစ်များမှ စတင်၍ Lego Star Wars လိုင်းနှင့် Ultimate Collector စီးရီးအစုံ၏အစောဆုံးလှိုင်း။ 7191 X- တောင်ပံတိုက်လေယာဉ် 2000 ခုနှစ်တွင်ဖြန့်ချိနှစ်ခု UCS အစုံထဲကတစ်ခုနှင့်တစ် ဦး ဖြစ်ခဲ့သည် Lego ၎င်းကိုဖြည့်ဆည်းရန် Group ၏အစောဆုံးကြိုးပမ်းမှုများ Star Wars ပရိသတ်ဟောင်းများဆီသို့ ဦး တည်သည့်ဆောင်ပုဒ် (လေးထောင့်ကွက်ပေါ်ရှိအကြံပြုထားသည့်အသက်အပိုင်းအခြားမှာ ၁၄+ ဖြစ်သည်) ။
aftermarket တွင်အသက် ၂၁ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သောမိတ္တူအသစ်များကိုမကြာခဏတွေ့ရလိမ့်မည်မဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည်ကမ်းလှမ်းထားသောအတိအကျဖြစ်သည် catawiki အခုပဲ။ သေတ္တာဖျံများကိုကံမကောင်းစွာချိုးဖောက်ခဲ့သော်လည်းအတွင်းရှိအိတ်များကိုမဖွင့်သေးသော်လည်းစတစ်ကာများကိုမူအသုံးမပြုရသေးပါ။ အကယ်၍ သင်ဟာရှေးဟောင်းပစ္စည်းတစ်ခုတည်ဆောက်ရန်စိတ်အားထက်သန်နေတယ်ဆိုရင် Lego Star Wars ဆောင်ပုဒ်, ဒီဖြစ်ကောင်းသင့်ရဲ့အကောင်းဆုံးအလောင်းအစားဖြစ်ပါတယ်။
← LEGOLAND ၏အွန်လိုင်းစတိုးတွင်အထူးသီးသန့်ပစ္စည်းများထပ်မံရရှိသည်
LEGO အလယ်ခေတ်ပန်းပဲဆရာကလေးသည်လေးကိုရည်ညွှန်းသည် Classic ရဲတိုက်အပြင်အဆင် →